निलेन्द्रराज श्रेष्ठको जन्म ललितपुर जिल्लाको पाटनमा भएको हो । उहाँ विगत तीस वर्षदेखि जर्मनीमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्नु हुने श्रेष्ठ विश्वव्यापी नेपालीहरुको सञ्जाल गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य हुनुहुन्छ । जर्मन नागरिकसँगै विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएका श्रेष्ठ दुई सन्तानका साथ जर्मनीमा बस्दै आउनु भएको छ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीको माग गरिरहनु भएको छ ढिला भएन र ? यो विषयमा ढिला हामीले गरेका होइनौ सरकारले नै गरेको हो । हामीले धेरै पहिले देखिनै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ भनेर आवज उठाउँदै आएका थियौ तर सरकारले यसको सुनुवाई नै गरेन । त्यसैले ढिलो भएको देखिएको हो । यदि यो सरकारले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यावस्थ गर्ने हो भने एक हप्तामा सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यस विषयमा हामीले सिहदरवार घेराउको कार्यक्रम पनि आयोगना गरेको थियौ तर सरकारले यस विषयमा कुनै सुनुवाई नै गरेन । यसको निरन्तरता हो यो आन्दोलन पनि । हामी आन्दोलन गरिरहने छौ ।
जनआन्दोलन २ को सफलतापश्चात् मुलुकमा थोरै अवधिभित्रै अनेक ऐतिहासिक, युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन हुँदैआएका छन् । दिगोशान्ति तथा पर्ूण्ा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अनिवार्य उपयुक्त संविधान ँसंविधानसभा�का माध्यमबाट नै बन्नु र्सवथा श्रेयस्कर हुनेभएकाले यतिखेर सबैको ध्यान संविधानसभाको निर्वाचनतर्फनै मोडिएको देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि शर्ीष्ास्थ आठ राजनीतिक दलद्वारा विश्लेषणात्मक अध्ययन, छलफलपछि छिटै निष्कर्षआउनेभएको छ । आठदलको सहमति, मेलमिलाप र एकताको बल मुलुकमा देखिएका तमाम समस्या तथा चुनौतीलाई पर पन्छाउँदै समुचित निकास दिन सक्षम रहेकाले सबै क्षेत्रमा आशाको किरण देखिएको हो ।
नेपाललाई सम्बृद्ध बनाउने सपना छ :डा.उपेन्द्र महतो
उपेन्द्र महतो एक आफैंमा एक पूर्ण परिचय बोकेको नाम हो । नेपालको सेवामा समर्पित एक नेपाली, उद्योगि अनी यस्तै यस्तै धेरै परिचय छन् उनको । हाल ग्रैर आवासिय नेपाली संघको अध्यक्षको रुपमा कार्यरत महतो नेपालको विकासका लागि नेपालबाहिर रहेका नेपालीको लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरणको निर्माणमा लागेका छन् । उता, ग्रैर आवासिय नेपालीले कतै भोलिका दिनमा नेपाल नै विर्सने हुन् कि भनेर दोहोरो नागरिकता दिलाउन नेपालभित्रै संर्घषरत छन् महतो । यस्तै बेलामा हामीले यो अङ्गको अनौपचारिक कुराकानीमा उनै महतोको चयन गरेका छौं । जस्तो प्रश्न त्यस्तै उत्तर दिएर आफ्नो कुशलता देखाएका महतोसंगको अनौपचारिक कुराकानी अब आफैं पढ्नोस् हैत ।
संविधानसभाः कतारबासी नेपालीको अवस्था र माग (अर्जुन थापा संगको अन्तरवार्ता)
संविधानसभाको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अझै पनि संविधानसभामा भाग लिन पाउनु पर्ने माग राखिरहनु भएको छ ,यस विषयमा प्रस्ट पारिदिनु न ?
युनाइटेड अरब इमिरेट्स -यर्ुर्एइ) खाडी मुलुकमध्ये आर्थिक फड्को मार्न सफल भएको एक सम्पन्नशाली मुस्लिम देश हो । यर्ुर्एइ ७ वटा साना राज्य मिलेर बनेको र यस्ता राज्यमा स्थानीय शासक रहे पनि ती सबै राज्य केन्द्रीय सरकारबाट नियन्त्रण र निर्देशित रहन्छन् । यर्ुर्एइको जनसंख्या ४१ लाख ४ हजार ९६५ -सन् २००५ को जनगणनाअनुसार) र यसको क्षेत्रफल ९०, ५५९ वर्गकिलोमिटर -टापुहरुसहित) छ । यहा�को जनसंख्याको तुलनामा कैयौं गुणामा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । विदेशी कामदारमा विशेषगरी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, फिलिपिन्स, चीन लगायत अमेरिकी र युरोपेली छन् । यर्ुर्एइ बहुभाषा, बहुराष्ट्रिय र बहुसंस्कृतिका मानिस अटाउन सफल एक खाडी मुलुक हो ।